Zidane oo ku mashquulsan barashada luqada ingiriiska iyo jah wareerka Mourinho oo halkiisa kasii socda – Gool FM
(Manchester) 28 Sab 2018. Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in macalinka reer France ee Zinedine Zidane uu diyaar u yahay leylinta kooxda Manchester United si uu noqdo badalka Jose Mourinho, hadii uu dalab rasmi ah ka helo maamulka sare ee Red Devils.
Zinedine Zidane ayaan qabanin wax shaqo ah tan iyo markii uu ka dhaqaaqay kooxda Real Madrid, kadib markii uu kula soo guuleesatay saddex jeer xiriir ah tartanka Champions League.
Laakiin Zidane ayaa haatan lagu soo waramayaa inuu qaadanayo casharo ah luqada ingiriiska, taasoo muujineysa inuu diyaar u yahay in shaqada kooxda Manchester United macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
Waxaa jira warar badan ee ku aadan in Zidane uu u dhaqaaqi doono kooxda Manchester United, kaliya waxay ku xiran tahay in Mourinho uu ka tagayo Old Trafford, inkastoo maamulku wali taageersan yahay shaqada uu kooxda ka hayo tababarka reer Portugal, laakiin waxaa la filayaa in xaalada ay is bedeli karto.
Diego Costa oo aaminsan in Real Madrid ay ku garaaci karaan Santiago Bernabeu kulanka Sabtida